Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Itobiya ee Washington oo dabaadagaya
Jaaliyadda Itobiya ee Washington oo dabaadagaya
Woyaanaha oo u soo diray canaasiirtiisii dalal Yurub-ta ka mid ah iyo America ayaa soo gaaray Washington DC, halkaasoo ay qawmiyadda Amxaarada aad ugu nooshahay, waxayna ahayd meel ay aad xooga u saareen indhahana ay dad badani ku hayeen. Dhamaan dalka Maraykanka intiisa kale ayaa laga sugayay siday wax ugu dhacaan goobta ay shirka ku qabta islahayeen oo ahayd Jamaacad Madowgu uu leeyahay oo layidhaahdo Howard University.
Jamaacadan ayaa xidhiidho badan lagala sameeyay inay ka noqdaan martigalinta shirka Woyanaha taasoo lagu guulaysan waayay. Hasa ahaatee markii dadkii banaanbaxayaasha ahaa oon wali badankoodii isa soo gaadhin ay afarta Jiho ee Washington DC ka soo dhaqaaqeen oo madaxii ugu horeeyayba la arkay ayaa durba cabsi daraadeed albaabada loogu laabay shirkii, intii yarayd ee u socotayna loo sheegay in safaarada gudaheeda loogu qaban doono.
Police-kii ilaalinayay ayaa banaabaxayaashii u sheegay in la joojiyay shirkii halkaas oo sacab iyo sawaxan lagu soo dhaweeyay, halkaasoo ay dhamaan mucaaradkii Woyanuhu iskugu hambalyeeyeen guusha laga soo hooyay Washington. Waxaa ku dhacay Woyaanihii dacaayad suuq geeya is lahaa jab uusan kasoo waaqsan doonin, iyagoo lacag badan ku khasaariyay qabashada shirkan.
Waxaa la rajaynayaa in gobalada kalee barri ay damacsanyihiin in ay xafaldo ku qabtaan ay kusii karaar qaadan doonaan waxa Washington ka gaadhay Woyaane.
Dadweynihii ka socday qawmiyadda Amxaarada ee Washington ayaa soo gaarsiiyay wariyaha wakaaladda bogaadin ay dirayaan qaybtii uu ka qaatay xafiiska JWXO u qaabilsan xidhiidhka qawmiyadaha ku dhaqan Itobiya iyagoo ugu baaqay in la sii xoojiyo wadashaqaynta jaaliyadaha dhexdooda ah.